आमाको मृ,त्यु भएको केहि समयमै बुवाको पनि मृत्यु, छोरीले ए’ड्सवाट गु,माइन् ज्या,न ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/आमाको मृ,त्यु भएको केहि समयमै बुवाको पनि मृत्यु, छोरीले ए’ड्सवाट गु,माइन् ज्या,न !
सप्तरीको राजविराजमा आइतबार साँझ ए’चआ’इभी एड्सबाट एक किशोरीको मृ’त्यु भएको छ । राजविराज नगरपालिका–१ चनौरा निवासी १६ वर्षीया अमैया धामीको स्थानीय गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृ’त्यु भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा रञ्जित झाले जानकारी दिनुभयो । *** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
उहाँका अनुसार विसं २०६८ वैशाख १ गते एचआइभी एड्सबाट आमाको मृ’त्यु भएको तीन दिनपछि बुबाको समेत सोही कारणले मृ:त्यु भएको थियो । मृ’त:क अमैयाका १२ वर्षीय भाइसमेत एचआइभी ए’ड्सबाट पी:डित भएको र नियमित औषधि खाने गरेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ ।*** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
पलको अबस्था कस्तो छ ? पललाई भेटेर फर्किएका जय बस्नेतले सुनाए यस्तो मनछुने कुरा, के भने पलले ?( भिडियाे हेर्नुस् )
नेपालमा भेटियो एउटा अनौठो घर, जुन घरको नजिकै भएर हिंड्दा नि हुन्छ डर